इमेल समर्थन info@qdruidetai.com
समर्थन कल 86-18661631650
तार डोरी अन्त फिटिंग
Crosby मिनी जाली शाफ्ट प्रकार बाँधने Turnbuc लोड ...
G450 HDG अमेरिकी प्रकार ड्रप जाली वायर डोरी क्ल्याम्प
M16 C15 टेलिफोन CR3 DIN582 भारोत्तोलन आँखा पागल जाली
जस्ती G403 गोहि अन्त्य कुंडा तातो डिप
जस्ती भाड पिन गज बंधन G209
मिश्र धातु इस्पात लाल ड्रप जाली आँखा माथि उठाना Liftin चित्रित ...
स्टेनलेस स्टील लामो डी बंधन लामो प्रकार
को स्टेनलेस स्टील लामो डी बंधन लामो प्रकार को 1 विवरण
सामाग्री: स्टेनलेस स्टील, SS304 वा SS316
उठाने संग प्रयोगको लागि उपयुक्त
को स्टेनलेस स्टील लामो डी बंधन लामो प्रकार को2उत्पादन विशिष्टता
वस्तु: स्टेनलेस स्टील लामो डी बंधन लामो प्रकार
प्रकार: लामो प्रकार
आकार: 4mm देखि 12mm गर्न
पैकिंग: पीपी बैग + दफ्ती + चटाई, वा अनुसार ग्राहकहरु '
लोड पोर्ट: किंगदाओ पोर्ट वा चीन मा अन्य बन्दरगाह
ढुवानी: जहाज वा हावा द्वारा
हामी लगभग 20 वर्ष पहिले एउटा एङ्कर श्रृंखला कारखाना रूपमा सुरु र बिस्तारै समुद्री आपूर्ति मा एक ठूलो निर्माता मा विकसित।
एकै समयमा, नयाँ व्यापार क्षेत्रमा हाम्रो ग्राहकबाट बढ्दो माग पूरा गर्न हामी अन्य कारखानों संग ठोस साझेदारी स्थापना द्वारा हेराफेरी हार्डवेयर र फास्टनरों, र अन्य सम्बन्धित हार्डवेयर हाम्रो स्कोप विस्तार।
अब हामी Rui डे ताई उत्तरी चीन मा चेन र हेराफेरी हार्डवेयर मा एक शीर्ष आपूर्तिकर्ता रूपमा सब छ भन्न गर्व हुनुहुन्छ।
2. आफ्नो कारखाना कहाँ स्थित छ?
हाम्रो कारखाना Jimo, किंगदाओ शहर, शेडोंग प्रांत, चीन मा स्थित छ।
तपाईं हामीलाई भविष्यमा सहयोगको लागि कुनै पनि समय भ्रमण गर्न स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं 3. के उत्पादनहरु आपूर्ति गर्छन्?
रूपमा समुद्री आपूर्ति, चेन, हेराफेरी हार्डवेयर, फास्टनरों, र सम्बन्धित हार्डवेयर को सबै प्रकार को आपूर्ति, माथि उल्लेख गरे।
4 तपाईं कसरी गुणस्तर नियन्त्रण गर्नुहुन्छ?
गुणस्तर नियन्त्रण अंक स्थापना र सख्त मानकहरु संग प्रत्येक प्रक्रिया उत्पादन मा निरीक्षण गरेर, बिग्रेको उत्पादनहरु प्याकेजिङ्ग र वितरण अघि निर्मूल गरिनेछ।
साझेदार कारखानों लागि, हामी उत्पादन लाइन मूल्याङ्कन गर्न गुणस्तर स्तर को एक व्यापक सिस्टम प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो पेशेवर QC टीम ओनसाइट चेक लागू र वितरण अघि उत्पादन चेक समाप्त हुनेछ।
5 तपाईं किन अन्य कारखानों भन्दा बढी भरपर्दो हो?
हामीलाई प्रतिक्रिया आफ्नो प्रश्न तुरुन्तै 24 एक दिन,7दिन हरेक हप्ता घण्टा।
हामी हरेक प्रक्रियामा नै गुणस्तर थप कुशल व्यवस्थापन गरेर स्तर आधारमा थप प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान गर्न सक्छन्।
तपाईँ के आवश्यक छ भन्न, र आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित गर्न लागि हामी बाहिर एक-स्टप समाधान आंकडा छौँ
आफ्नो समय र प्रयास।
6 म कसरी तिर्नुहुन्छ?
हामी टी / टी या एल / सी द्वारा या त अग्रिम 30% भुक्तानी र पहिलो सहयोगको लागि ढुवानी अघि 70%, स्वीकार।
7 माल म कसरी प्राप्त गर्छन्?
हाम्रो पेशेवर परिवहन एजेन्ट संग, हामी सबै दुनिया भर सबैभन्दा बंदरगाहों वितरण उत्पादनहरु सक्षम छन्। ढोका-को ढोका सेवा पनि समर्थन छ। एफओबी, सी र एफ, सीआईएफ सबैभन्दा सामान्यतः व्यापार सर्तहरू प्रयोग गरिन्छ।
किन्न स्वागत र थोक हाम्रो तातो बिक्री स्टेनलेस स्टील लामो घ बंधन लामो प्रकार। हामी सबैभन्दा व्यावसायिक र प्रमुख RIGGING उत्पादनहरु निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ता मध्ये एक हुनुहुन्छ। कृपया हामीलाई बाट मुक्त नमूना प्राप्त र थप जानकारी को लागि हाम्रो कारखाना सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र हुन।
अघिल्लो: 55T21 / 2US प्रकार बोल्ट प्रकार दल बंधन G2150
1/2 र 3/32 युरोपेली प्रकार वायर डोरी Thimbles
3 / 4inch G209 अमेरिकी भाड पिन गज बंधन प्रकार
टेलिफोन बी प्रकार निंदनीय वायर डोरी क्लिप्स Lowes
M16 C15 टेलिफोन CR3 DIN582 भारोत्तोलन ई जाली ...
M16 टेलिफोन जाली शारीरिक DIN1480 Turnbuckles ...
सुरक्षा एल संग 5/16 जस्ती Clevis स्लिप हुक ...
तार डोरी क्लिप को प्रयोग के हो?
स्टेनलेस स्टील Thimbles जडान
स्टेनलेस स्टील Thim को मूल्य के छ ...
को जनसंपर्क को प्रयोग मा RIGGING बंधन ...
उठाने हुक को वर्गीकरण